सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ ? - NA MediaNA Mediaसरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ ? - NA Media
नागरिक एप्समा नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचय पत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर राहदानी नम्बर, कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बर राखेपछि त्यसको पुर्ण विवरण एपले देखाउनेछ । नागरिक एपले आफैँ आवश्यक विवरण लिने र पुष्टी गर्ने काम गर्छ । नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जस्ता कागजात साथमा बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । यो एप प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो रहेको उनले बताए ।